အင်းတော်ကြီး ဘုရားပွဲတွင် အရက်၊ ဘီယာ၊ မူးယစ်ဆေးနှင့် လောင်းကစားပြုလုပ် ရောင်းချပါက အရေးယူ? - Yangon Media Group
မိုးညှင်း၊ မတ် ၁ဝ
ကချင်ပြည်နယ် မိုးညှင်းမြို့နယ် အင်းတော်ကြီးဒေသရှိ အကြိမ် (၁၅ဝ) မြောက် အင်းတော်ကြီး ရွှေမဉ္ဇူရေလယ် ဘုရားပွဲတော်တွင် စက်လှေစီးသူများ အသက်အန္တရာယ် မရှိစေရေးအတွက် စက်လှေမောင်းနှင်သူများအား ပညာပေးသင်တန်းများပို့ချ ပြီး အရက်၊ ဘီယာ၊ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် လောင်းကစားရုံများ ပြုလုပ် ရောင်းချခွင့်မပြုရန် အသိပေးထား ကြောင်း သိရသည်။
”ဘုရားပွဲတော်ရက်တွေမှာ အရက်၊ ဘီယာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကြော်ငြာကအစ ကပ်ခွင့်မပြုသလို ရောင်းချသုံးစွဲခွင့် မပြုပါဘူး။ လောင်းကစားနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကစားနည်း မှန်သမျှ လုံးဝခွင့်မပြုပါဘူး။ ပွဲဈေးဆိုင်ခန်းတွေ စည်းမျဉ်းဆွဲ ပေးထားတဲ့ သတ်မှတ်ဘောင်ထက် ကျော်လွန်ခင်းကျင်း ရောင်းချခွင့် မပြုပါဘူး” ဟု မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးရဲအောင်က ပြောကြားသည်။ အင်းတော်ကြီး ရွှေမဉ္ဇူရေ လယ်ဘုရား ဗုဒ္ဓပူဇနိယပွဲတော်ကို ချောင်းဝဆရာတော်ကြီးအား အ မှူးထား၍ နှစ်စဉ်တပေါင်းလဆန်း ၈ ရက်တွင် စတင်ဖွင့်လှစ် ကျင်းပ လေ့ရှိသည်။
”စည်းကမ်းမလိုက်နာတဲ့ပွဲဈေး ဆိုင်ခန်းယူရောင်းချ လုပ်ကိုင်သူ တွေကို ထိရောက်စွာအရေးယူသွားမှာပါ”ဟု အင်းတော်ကြီးဘုရားပွဲတော် ကျင်းပရေးကော်မတီမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။ ယခုအခါအဆိုပါ ဘုရားပွဲ တော်ရက်အတွင်း စက်လှေစီးသူများ အသက်အန္တရာယ်လုံခြုံရေး အတွက် စက်လှေမောင်းနှင်သူများအား ပညာပေးသင်တန်းများပို့ချ ပေးခဲ့ပြီး ပွဲတော်ရက်အတွင်းဘုရား ဖူးပြည်သူများ စိတ်အေးချမ်းသာ ဘုရားဖူးလည်ပတ်နိုင်ရန်အတွက် လုံခြုံရေးကို စနစ်တကျ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဒေသတွင်းနိုင်ငံများတွင် မြန်မာလုပ်သားများ အလုပ်ကောင်း ရရှိရေးနှင့် လူမှု အကာအကွယ်ပေးနိုင်?
‘မြန်မာကိုရောက်တဲ့ အချိန်တုန်းက ရွှေနဲ့လုပ်ထားတဲ့ ဘုရားကို တွေ့ခဲ့တယ်။ ကြည့်ရတာ အရမ်းကို ခမ?